धर्म/जीवनशैली – हाम्राे पिपलबाेट
Author hamropipalbotPosted on १ भाद्र २०७६ August 18, 2019 Categories धर्म/जीवनशैली, मुख्य समाचार, समाचारLeaveacomment on औंराह बाबा मन्दिर निर्माणकालागि धार्मिक महोत्सव संचालन गरिदै
रुरुक्षेत्र धामलाई विश्व सामु चिनाउन विराट ज्ञान महायज्ञ हुने
कोहलपुर २४ साउन /नेपालकै चारधाम मध्येको मुख्य धाम गुल्मी, स्याङजा र पाल्पाको संगम स्थल रुरुक्षेत्र धाममा यहि आउँदो भदौ २८ गतेदेखि असोज १७ गतेसम्म ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन हुने भएको छ । सो धामलाई विश्वमै चिनाउने उद्देश्यले ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गरिन लागेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । सोह्र श्राद्धको पावन अवशरमा सम्पुर्ण पितृहरुको विधिवत श्राद्ध गरी पृत उद्धार गरीने,२१ करोड दिप प्रज्वलन गरिने,देश विदेशमा ख्याति प्राप्त सन्तमहात्माहरुको उपस्थिति रहने तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त संगीतमय र लिलामय कलाकारहरुको उपस्थिति रहने बताईएको छ ।
ऐतिहासिक रुपमा सञ्चालन हुने महायज्ञमा सहभागी बन्न यतिबेला गुल्मीसँगै जिल्ला बाहिरबाट पनि सम्पर्क बढिरहेको छ । भने केही व्यक्तिहरुले दान प्रदान गरिरहेका छन । ऐतिहासिक ज्ञान महोत्सवलाई सफल बनाउनका लागि यतिबेला प्रचार–प्रसारलाई समेत तिव्र पार्न थालिएको मूल आयोजक समितिले जनाएको छ । महायज्ञमा ५ लाख भन्दा बढी भक्तजनहरुको उल्लेखीय सहभागीता गराउने लक्ष्य राखिएको बताईएको छ । यस महायज्ञबाट रुरु क्षेत्रधामको विशेष प्रचारप्रसारका साथै यसको महिमा बढ्ने बिश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
भाद्र २८ गते देखि असोज १७ गते सम्म संचालन हुने महायज्ञमा रु २१ सयमा कर्ता बनि पुजन गर्न सकिने बताइर्एको छ । ऐतिहासिक रुरु धार्मिक तथा साँस्कृतिक तुलादान महामहोत्सव एवं संगीतमय लीलामय श्रीमदभागवत पितृमोक्ष विराट ज्ञान महायज्ञ २०७६ मा सहभागी भइ रुरु क्षेत्र धाम लाई विश्व सामु चिनाउन सबैलाई आग्रह समेत गरिएको छ महायज्ञमा १ सय ८ तीर्थस्थल्को जलसहित हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिने भएको छ ।
महायज्ञमा विश्व विख्यात श्रीमद्भागवत कथा प्रवक्ता श्री बालयोगेश्वर महाराजीको संगीतमय कथा बाचन रहने बताइएको छ । त्यस्तै ५ हजार १ सय शान्ती कलश पुजन गरिने शालीग्राम परिक्रमा गरिने १ हजार १ सय भन्दा बढी स–साना कन्याहरुको पुजन गरिने करिब २५ हजार भन्दा बढी ७० वर्ष भन्दा माथी उमेर पुग्नु भएका जेष्ठ नागरिकहरु विशेष सम्मान गरिने समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सम्मान गरिने , वनारस हरिद्वार पशुपतिनाथ मा जस्तै प्रत्येक दिन काली गण्डकी को विशेष सन्ध्या आरती हुने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
Author hamropipalbotPosted on २४ श्रावण २०७६ Categories धर्म/जीवनशैली, मुख्य समाचार, समाचारLeaveacomment on रुरुक्षेत्र धामलाई विश्व सामु चिनाउन विराट ज्ञान महायज्ञ हुने
Author hamropipalbotPosted on १९ असार २०७६ Categories धर्म/जीवनशैलीLeaveacomment on फर्सीको मुन्टा खानुका यस्ता छन् फाइदा
कोहलपुर एफएमद्वारा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
बाँकेको कोहलपुरमा रहेको सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएमले नव वर्ष २०७६ को अवसरमा विशेष बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय कला सांस्कृतिको संरक्षण सम्वद्र्वन तथा स्थानीय प्रतिभाहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै बाँके क्षेत्र नं. १का सांसद महेश्वर गहतराज अथकले समाज रुपान्तरणमा सादुयिक रेडियोह्ररुले महत्वपूर्ण भूमिका खलेको बताएका छन् । साथै उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सञ्चार क्षेत्र उल्लेखनिय योगदान पु¥याएको भन्दै अब सञ्चार क्षेत्रले जनताका मुद्वाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै बाँके क्षेत्र नं. १ (क) प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमूनाले जनताका आवश्यकताहरुलाई राज्यको निकायसम्म पु¥याउने माध्याम नै सञ्चार क्षेत्र भएकाले सञ्चारजगतबाटै साँस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताईन् । कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चक्र बहादुर अधिकारीले व्यापार व्यवसायिक हक र हितका लागि सञ्चार क्षेत्र सँग सहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । साथै उनले कोहलपुर क्षेत्रको विकास र समृद्विका सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफ एमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएमका संस्थापक अध्यक्ष भानुभक्त भट्टराईले कोहलपुरको पहिचान नै सामुदायिक रेडियो भएकोले सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएमलाई स्थानिय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर नगरपालिका सामाजिक विकास संयोजक नारायणि वलीले स्थानिय सरकारले स्थानिय सञ्चार माध्यमको विकास र सम्बद्र्वन गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएमका प्रबन्धक तेज प्रसाद अधिकारीले यस क्षेत्रको विकासका लागि सबै सँग रेडियो सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । साथै कार्यक्रममा चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका टिकापुन, गायक कृष्ण रेउले, र सपना शाहीको विशेष प्रस्तुती रहेको थियो । कार्र्यक्रममा सहयोग गर्ने सहयोगदाता तथा विज्ञापनदातालाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।
Author hamropipalbotPosted on १ बैशाख २०७६ April 14, 2019 Categories धर्म/जीवनशैली, फिचर न्युज, मुख्य समाचारLeaveacomment on कोहलपुर एफएमद्वारा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
Author HamropipalbotPosted on ३० जेष्ठ २०७५ Categories धर्म/जीवनशैली, राशिफलLeaveacomment on आजको राशिफल (वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ३१ गते बिहीबार)
आजको राशिफल (वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ३० गते बुधबार)
Author HamropipalbotPosted on ३० जेष्ठ २०७५ Categories धर्म/जीवनशैली, राशिफलLeaveacomment on आजको राशिफल (वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ३० गते बुधबार)
आजको राशिफल (वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ २८ गते सोमबार)
Author HamropipalbotPosted on २७ जेष्ठ २०७५ June 10, 2018 Categories धर्म/जीवनशैली, राशिफलLeaveacomment on आजको राशिफल (वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ २८ गते सोमबार)
किन बिहे नगरेको ? कारण यी पनि हुन सक्छन्
जब तपाईंको उमेरले २५ बर्ष पार गर्छ, तपाईंले सबैभन्दा बढी झेल्ने प्रश्न के होला ? सोच्नुहोस् त । कति पढेको छौं ? जागिर के छ ? कति कमाउँछौं ? कसको छोरो ? भविष्यमा के गर्ने बिचार छ ?
यी त सहायक प्रश्न भए । तपाईं अझ बढी घोत्लिनुहोस् त । पक्कैपनि तपाईंले बढी झेलेको प्रश्न हो, ‘किन बिहे नगरेको ?’
अबिबाहितको हकमा यी प्रश्नले सबैभन्दा बढी रिंगाइदिन्छ । यतिबेला तपाईं के जवाफ दिनुहुन्छ ? भन्नुहोला, ‘बिहे गर्ने उमेर भा, छैन यार ।’ भन्नुहोला, ‘आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि गरौंला नि, के हतार गर्नु ।’ भन्नुहोला, ‘मिल्दो जोडी पाएकै छैन, बरु यसो सोधीखोजी गरौं न ।’ भन्नुहोला, ‘पढाई चल्दैछ, करियर बनाएपछि गर्ने हो ।’
यी जावफहरुले त तपाईंलाई उम्कन सजिलो बनाउँछ । तर, तपाईंको मनभित्र पनि कताकता लाग्दो हो, ‘हैट, यत्तिकै बुढो पो भइने हो कि ?’
लर्के जोवनले छोपेपछि
नेपालीमा एउटा भनाई छ, ‘बिहेबारी, बिस बर्षपारी ।’ खासमा बिबाहका लागि शारीरिक तथा मानसिक परिपक्कता हुनुपर्छ भन्ने आशयमा यो भनाई आएको हो । तर, २० बर्ष पार गर्नसाथ हामीलाई सबैभन्दा बढी खेद्ने प्रश्न भनेको ‘अब बिहे गर्ने बेला भएन र ?’ नै हो । पूर्विय संस्कारमा पनि बिहेको निश्चित उमेर तय गरिएको छ । विद्या आर्जन गरिसकेपछि, शीप, दक्षता, क्षमता, ज्ञानले परिपूर्ण भइसकेपछिको समय घरगृहस्थीको लागि हो ।
अवस्था के पनि छ भने, निश्चित उमेरमा घरजाम गरिएन भने बुढ्यौलीमा दुख पाइन्छ । आफ्नो उर्जा, जोश, ताकत सबै शिथिल हुँदै गएपछि बिबाह गर्दा धेरै कुरा असन्तुलित हुनपुग्छ । त्यही कारण पनि निश्चित समयभित्र बिबाह गरिसक्नुपर्छ भनिन्छ । यावत् कारण पनि २२ वा २५ बर्ष उमेर पार गरिसकेपछि ‘बिबाह कहिले गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ, जो स्वभाविक हो ।
अबिबाहित किन ?
कतिपय त लभ-रिलेसनमा हुन्छन् । उनीहरु आफ्ना प्रेम सम्बन्धलाई उचित मौका मिलाएर ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ गर्ने तरखरमा हुन्छन् । अर्थात बिबाह गर्ने योजनामा हुन्छन् । तर, कतिपयको भने अफेयर नै हुँदैन । न उनीहरुले बिहेको कुनै तयारी नै गरेका हुन्छन् । कतिपय त लभ-रिलेसनमा हुन्छन् । उनीहरु आफ्ना प्रेम सम्बन्धलाई उचित मौका मिलाएर ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ गर्ने तरखरमा हुन्छन् । अर्थात बिबाह गर्ने योजनामा हुन्छन् । तर, कतिपयको भने अफेयर नै हुँदैन । न उनीहरुले बिहेको कुनै तयारी नै गरेका हुन्छन् । किन यस्तो हुन्छ ? यदि तपाईंको बिबाह गर्ने उमेर भयो, यद्यपी तपाईं अझै सिंगल नै हुनुहुन्छ भने त्यसको कारण अनेक हुनसक्छ । आखिर तपाईं किन कसैसँग लभ रिलेसनमा रहनुभएन ? किन उमेर पुगेर पनि बिबाहको तयारी थाल्नुभएन ?
तपाईं आफु स्वयम्लाई बढी माया गर्नुहुन्छ
राजेश हमालले उमेर छिप्पिएपछि बिबाह गरे । बिबाह गर्नुअघिसम्म उनले संभवत सबैभन्दा बढी त्यही प्रश्न झेले, जुन हामीले चर्चा गरिरहेका छौं । उनको जवाफ के हुनसक्थ्यो भने, ‘मलाईं अहिले आफ्नैलागि पनि समय छैन ।’ त्यसबेला उनी अति व्यस्त थिए । आफ्नो व्यस्त दैनिकीकाबीच घर, परिवारलाई दिनुपर्ने समय उनीसँग थिएन सायद । बिबाह गरिसकेपछि आफ्नो करियरलाई त्यही गतिमा बढाउन पनि नसकिने, जति सिंगल हुँदा सकिन्छ । कहिले काहीँ तपाईं सोच्नुहुन्छ होला कि, तपाईंसँग परिवारलाई दिने समय छैन । यसको अर्थ के भने, तपाईं स्वयम्लाई प्रेम गर्नमा बढी तल्लिन हुनुहुन्छ । तपाईं अरुलाई भन्दा बढी आफैलाई महत्व दिनुहुन्छ । यही मनोविज्ञानले तपाईंलाई अर्को पाटर्नर पाउन वा खोज्न अनुकुलता मिलिरहेको छैन ।
तपाईं सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्न
जब हामी अर्का व्यक्तिसँग आफुलाई एकाकार गर्ने प्रयास गर्छौं, तब हामीले आफुलाई ‘आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्न मिल्दैन । धेरै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ । यदि तपाईं कुनैपनि कुरामा सम्झौता गर्न राजी हुनुहुन्न भने, तपाईंले अर्कासँग सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्न । खासमा यो तपाईंको इगोभन्दा अरु केही होइन, जसको कारण तपाईं कसैको सहयोग वा एडजस्टका लागि तयार हुनुहुन्न ।
तपाईं अझै अतितमा हुनुहुन्छ
तपाईं अहिलेसम्म सिंगल हुनुमा तपाईंको अतित पनि जिम्मेवार हुनसक्छ कि, जब तपाईं कुनै सम्बन्धबाट भर्खर बाहिर आउनुभएको छ । अर्थात तपाईको ब्रेकअप भएको थियो । त्यही कुराले तपाईंलाई अहिलेपनि सताइरहेको छ । तर, भविष्यको सम्बन्धका लागि तपाईंले अतितको कुरा भुल्नु सर्बोत्तम बिकल्प हो ।
तपाईं सिंगल व्यक्तिबाट प्रभावित
बिबाह गर्नैपर्छ भन्ने केही छैन । बिबाहले नै जीवन पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि छैन । समाजमा कति यस्ता व्यक्ति छन्, जो रिलेसनमा छैनन् । बिबाह गरेका छैनन् । यस्ता व्यक्तिहरु पारिवारिक वन्धनबाट उन्मुक्त भएर स्वतन्त्र ढंगले जीवन विताउन चाहन्छन् । तपाईं पनि यीनै व्यक्तिहरुको जीवनशैली, सोंचबाट प्रभावित भएको हुनसक्छ ।
तपाईं महसुष गर्नुहुन्छ कि, सम्बन्धको लागि तयार छैन
उमेरले मात्र पनि सबै कुरा हुँदैन । घर गृहस्थी समहाल्नका लागि आफुसँग आधार पनि चाहिन्छ । त्यस्तो आधार तय नभइसकेको अवस्थामा पनि तपाई अरुसँग सम्बन्धमा रहन चाहनुहुन्न । बिबाह गर्ने हतार गर्नुहुन्न ।
Author HamropipalbotPosted on २७ जेष्ठ २०७५ Categories धर्म/जीवनशैलीLeaveacomment on किन बिहे नगरेको ? कारण यी पनि हुन सक्छन्
यस्तो छ साप्ताहिक राशिफल, २०७५ ज्येष्ठ २६ – आषाढ १ गतेसम्म
साता सरदर खालको रहनेछ । शनिबार उच्च खर्च हुन सक्नेछ । रवि, सोमबार भाग्यवर्धक अवसर प्रकट हुनेछ । मंगल, बुधबार मध्यम प्रायः रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार सर्वाधिक क्रियाशील रहनेछ । यश मिल्नेछ ।
साताका अधिकांश दिन अनुकूल रहनेछन् । शनिबार सबै प्रकारले लाभदायक रहनेछ । रवि, सोमबार सावधानयोग्य रहनेछ । मंगल, बुधबार उच्चस्तरीय कार्यप्रदायक रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार बोलीवचनमा प्रभाव बढ्नेछ ।
साताको प्रायः दिन अनुकूल रहनेछन् । शनिबार सम्मानित भइनेछ । रवि, सोमबार नवीन आयस्रोत खुल्नेछ । मंगल, बुधबार प्रतिकूल रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार उपयुक्त अवसर प्राप्त हुनेछ । ठूलाबडा व्यक्तिहरुसँग भेटघाट हुनेछ ।
साताको सुरु र अन्तिम बाहेकका बाँकी सबै दिन अनुकूल रहनेछन् । शनिबार मध्यम प्रायः रहनेछ । रवि, सोमबार कडा संघर्षपूर्वक कार्यक्रम बन्नेछ । मंगल, बुधबार सबैतिरबाट अनुकूल र लाभदायक रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार व्यवधान बढ्नेछ ।
साताको उत्तरार्धका दिन अनुकूल रहनेछन् । शनिबार प्रतिकूल रहनेछ । रवि, सोमबार मध्यम प्रायः रहनेछ । मंगल, बुधबार मानसम्मान पदप्रतिष्ठा मिल्नेछ । बृहस्पति, शुक्रबार महिलाका तर्फबाट लाभ हुनेछ । मन प्रसन्न रहनेछ ।
साताको सुरु र अन्तिम अनुकूल रहनेछ । शनिबार यात्रा, व्यापार व्यवसाय र पारवहन कार्य सहज रहनेछ । रवि, सोमबार प्रतिकूल रहनेछ । मंगल, बुधबार मध्यम रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार कठिनाइका साथ आटेको काममा सफलता मिल्नेछ ।
साताको पूर्वार्ध अनुकूल रहनेछ । शनिबार आटे ताकेको काम सजिलै बन्नेछ । रवि, सोमबार दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । मनोरञ्जन गरिनेछ । मंगल, बुधबार प्रतिकूल रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार धर्मकर्ममा अवरोध आउन सक्नेछ ।
साताको सुरु र अन्तिम बाहेकका सबै दिनहरु अनुकूल रहनेछन् । शनिबार सावधानयोग्य रहनेछ । रवि, सोमबार शत्रु पराजित हुनेछन् । मंगल, बुधबार अत्यन्त सुखद र रमाइलो रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार शिथिल प्रायः रहनेछ ।
साताको पछिल्ला दिन अनुकूल रहनेछन् । शनिबार नितान्त प्रतिकूल रहनेछ । रवि, सोमबार मध्यम प्रायः रहनेछ । मंगल, बुधबार मावलीतिरबाट सन्तोष मिल्नेछ । बृहस्पति, शुक्रबार आयआर्जन र विद्याबुद्धि बढ्नेछ । मन रमाउनेछ ।
साताको सुरु र अन्तिम अनुकूल रहनेछ । शनिबार सामाजिक दायित्व थपिनेछ । यश, कीर्ति मिल्नेछ । रवि, सोमबार प्रतिकूल रहनेछ । मंगल, बुधबार मध्यम रहनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार शत्रु परास्त हुनेछन् । आत्मबल बढ्नेछ ।
साताको थोरै मात्र दिन अनुकूल रहनेछ । शनिबार बोलीवचनमा सावधान रहनु पर्नेछ । रवि, सोमबार साताकै सर्वाधिक सफलता प्रदायक रहनेछ । दीर्घकालीन कार्ययोजना बन्नेछ । मंगल, बुधबार प्रतिकूल रहनेछ बृहस्पति, शुक्रबार मनमा चिन्ता हुनेछ ।
साता मिश्रित रहनेछ । शनिबार भाग्योदय हुनेछ । उच्चस्तरीय कार्यक्रम बन्नेछ । रवि, सोमबार मध्यम रहनेछ । मंगल, बुधबार साताकै सर्वाधिक कार्यसिद्धिदायक रहनेछ । जोश, जाँगर बढ्नेछ । बृहस्पति, शुक्रबार शिथिल प्रायः रहनेछ ।
Author HamropipalbotPosted on २७ जेष्ठ २०७५ June 10, 2018 Categories धर्म/जीवनशैली, राशिफलLeaveacomment on यस्तो छ साप्ताहिक राशिफल, २०७५ ज्येष्ठ २६ – आषाढ १ गतेसम्म
Author HamropipalbotPosted on २७ जेष्ठ २०७५ Categories धर्म/जीवनशैली, राशिफलLeaveacomment on तपाइकाे आजको राशिफल (२०७५ ज्येष्ठ २७ गते आइतबार)